တရုတ်နိုင်ငံက Zhongxing-1D ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင် - Xinhua News Agency
ရှီးချန်း၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ်ရှိ ရှီးချန်းဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ဂြိုဟ်တုအသစ်တစ်စင်းကို ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်) က အာကာသအတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ်၊ ရှီးချန်းဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ Zhongxing-1D ဂြိုဟ်တုအား တင်ဆောင်ထားသော Long March-3B သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံအား နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်က လွှတ်တင်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Zhongxing-1D ဂြိုဟ်တုအား ပေကျင်းစံတော်ချိန် နံနက် ၀:၄၀ နာရီက Long March-3B သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စီစဉ်ထားသော ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ယခုအကြိမ် လွှတ်တင်မှုသည် Long March စီးရီး၏ ၃၉၉ ကြိမ်မြောက် လွှတ်တင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
XICHANG, Nov. 27 (Xinhua) — China successfully sentanew satellite into space from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China’s Sichuan Province Saturday.
This launch marked the 399th mission for the Long March series carrier rockets. Enditem
1-3– A Long March-3B carrier rocket carrying the Zhongxing-1D satellite blasts off from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China’s Sichuan Province, Nov. 27, 2021. The satellite, Zhongxing-1D, was launched at 0:40 a.m. (Beijing Time) and entered the planned orbit successfully. (Photo by Bai Xiaofei/Xinhua)